यदि तपाईं भर्खरै नेदरल्याण्ड्स जानुभएको छ वा केहि दिनको भ्रमण गर्नको लागि ट्रेनमा उफ्रिने सोचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं शायद के सोच छन् 10 सबैभन्दा विशेष घटनाहरू नेदरल्यान्ड्स मा हो. तपाईं त्यहाँ गर्न तत्पर गर्न धेरै छ थाहा खुसी हुनेछ, कुनै कुरा वर्ष को कुन समयमा तपाईंले भ्रमण.
यो ती मध्ये एक छ नेदरल्यान्ड मा विशेष घटनाहरू hearted को बेहोश लागि छैन कि! तपाईं वर्ष ताजा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, नयाँ साल दिन मा लिएको एक खुर्सानी गोता लिन (नयाँ वर्षको दिन). यो डच तिहार मा एक पौडनु क्लब सुरु गरिएको थियो 1960. छन् 209 गोता स्थानहरू नेदरल्यान्ड मा तपाईं एक गोता लाग्न सक्छ. हुनत, मा डाइभिंग उत्तर सागर, हेगुइ, अप गर्न संग सबै भन्दा लोकप्रिय स्थान छ 60,000 मान्छे. त्यसपछि, shivering swimmers erwtensoep एक कप प्रस्तुत गर्दै, न्यानो meaty मटर सूप.
तपाईं नेदरल्यान्ड युरोप मा सबै भन्दा ठूलो चिनियाँ समुदाय को एक छ थाहा छ? हामी निश्चित हाम्रो माथि लायक एक स्थान छ लाग्छ 10 नेदरल्यान्ड सबैभन्दा विशेष घटनाहरू! तिनीहरूले predominantly एम्स्टर्डम बस्ने, रोट्टरड्याम, र द हेग, जसमा चिनियाँ नयाँ वर्ष मना घटनाहरू एक सीमा छ. एम्स्टर्डम मा, ड्रागन parades हेर्न बाँध वर्ग र Nieuwmarkt / Zeedijk टाउको, सिंह नृत्य, र आतिशबाजी. तपाईं पनि डी Bijenkorf विभाग भण्डारमा विशेष गतिविधिहरु धाउन सक्नुहुन्छ, सुलेखन कार्यशालाओं सहित, संगीत प्रदर्शन, र चिया समारोह, वा मा बौद्ध मन्दिर Fo Guang शान उहाँले भयो.
दिन खाना बारेमा पनि छ, र एम्स्टर्डम मा, तपाईं सडक बजार मा स्वादिष्ट खाना खान सक्नुहुन्छ, समुद्रको महल मा (Europes पहिलो चिनियाँ रेस्टुरेन्ट अस्थायी), वा धेरै मध्ये एक मा चिनियाँ रेस्टुरेन्ट को Stormsteeg र Geldersekade साथ. हेगुइ मा, तपाईं मिल चिनियाँ चाडहरूमा शहर हल को Atrium र Wagenstraat वरिपरि गुफा Haags टाउन मा. तपाईं चिनियाँ नयाँ वर्ष सम्म अग्रणी रोट्टरड्याम घटनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ, पुरानो पश्चिम र Westkruiskade टाउन चिनियाँ वरिपरि उत्सव एक दिन बन्द topped wijkpark. तपाईं अन्धविश्वास हो भने, चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या एक कच्चा माछा सलाद खान (यू शेंग) ल्याउन शुभकामना वा Fai हाई, शैवाल एक प्रकार, समृद्धि लागि. Gong क्सी Fa कै! (नयाँ बर्षको शुभकामना!)
नेदरल्यान्ड मा विशेष घटनाहरू निःशुल्क खाना समावेश गर्दछ भने, तपाईं मलाई गणना गर्न सक्नुहुन्छ! मा 50% बन्द, यो एक चोर्न व्यावहारिक छ! यो डच भ्रमण खाद्य लागि तिहार, जहाँ तपाईं नेदरल्याण्ड्समा पागल छुटको लागि शीर्ष शीर्ष रेस्टुरेन्टहरूमा खाना खान सक्नुहुन्छ.
धेरैमा सयौं सहभागी रेस्टुरेन्टहरू डच शहर को विशेष दर को लागि एक आश्चर्य तीन पाठ्यक्रम खाने मेनु प्रस्ताव 28,50 यूरो. मिशेलिन तारा अङ्कित रेस्टुरेन्ट अतिरिक्त शुल्क, र रेस्टुरेन्ट शीर्ष मा सूचीबद्ध 250 पनि एउटा सानो पूरक आवश्यक. तपाईं आफ्नो वालेटमा एक प्वाल को धेरै राख्दै बिना केही फरक ठीक भोजन विकल्प प्रयास गर्न सीमित बजेट वा बस उत्सुक एउटा foodie होस्, त्यसपछि तपाईं प्रेम गर्नेछ भोजनालय हप्ताको. यो विशेष अफर नेदरल्यान्ड मा दुई पटक एक वर्ष ठाँउ लिन्छ.
एक नेदरल्यान्ड मा सबै भन्दा विशेष घटनाहरू, यदि सबै भन्दा रमाइलो र अव्यवस्थित मध्ये एक, मा छ राजा दिन, Which छ राजा Willem अलेक्ज्याण्डर जन्मदिन. डच शहर सडक दल पाहुना, फ्लिया बजार, र गतिविधिहरु, वर्ष को सबै भन्दा ठूलो तिहार मा नेदरल्यान्ड को सम्पूर्ण खोल्दै. तपाईं निश्चित सबैभन्दा को एक यो थप्न सक्नुहुन्छ नेदरल्यान्ड मा विशेष घटनाहरू! मान्छे मनाउन बाहिर टाउको, संगीत बजाउन, सुन्तलामा लुगा, र एक अलराउन्ड राम्रो छ, यदि अस्तव्यस्त छैन, समय. राजा रात राजा दिन अघि रात मनाइन्छ, मा जंगली पार्टीहरु संग शहर केन्द्रहरू आकर्षित वरिपरि माईलदेखि भीड.
के तपाईंले कहिल्यै नौ मिटर अग्लो फ्लोट देख्नुभएको छ?, फूल समेटिएका र सडकमा मार्फत ग्लाइडिङ, जनशक्ति तर केही द्वारा संचालित? राम्रो, तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ! फूल Zundert संसारमा सबै भन्दा ठूलो फूल परेड सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरु गरेको छ. हरेक वर्ष प्रत्येक hamlet यो कहिल्यै निर्माण गरेको छ भन्दा सुन्दर फ्लोट निर्माण गर्न खोज्छ. तपाईं बढ्तै गरिनेछ रूपमा Zundert यो धेरै विशेष घटना भ्रमण. Corso Zundert देखेर र बारेमा सबै छ, कि, विश्वास!
फनफेयर र असंख्य पार्टीहरूको बावजुद, Leidens Ontzet ऐतिहासिक अर्थ धेरै परम्परा एक उत्सव हो. तीन अक्टोबर को बिहान शहर हल मा reveille संग सुरु. निःशुल्क माछा र सेतो रोटी त्यसपछि बाहिर दिइन्छ लियडेन Waag. तपाईं त एक सांगीतिक जमघट आनन्द उठाउन सक्छौं भ्यान डेर Werf पार्क र Pieterskerk सेवा. साँझ मान्छे मा परंपरागत Hutspot भनिने गाजर र प्याज स्ट्यु खान. को पर्वहरू महान् पटका शो अन्त्य.
सेल परम्परागत रूपमा सुरू गर्दछ परेड: सयौं जहाजहरू आईजेमा यात्रा गर्छन् र एक अनौंठो दृश्य बनाउँदछ जुन तपाईंले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न. निम्न दिन, पानी ले ठाँउ मा धेरै मेल खाने, लगायत Skutsjesilen(एक विशिष्ट फ्रिसियाई जहाज संग जलयात्रा). रोयल नेदरल्याण्ड नेवीले पनि पानीमा आफ्नो सीप प्रदर्शन गर्दछ.
विशेष campsites, किफायती शिविर, र जंगली मा शिविर Tenting दिन समयमा नेदरल्यान्ड मा सम्भव छ (आफ्नो पाल देखि). को Tenting दिन को संगठन धेरै सहयोगिहरु संग cooperates. अर्थात्; शिविर साइटहरु, नेदरल्यान्ड मा प्राकृतिक स्मारक को संरक्षण को लागि समाज, साथै वन आयोग रूपमा. तपाईं सबैभन्दा रोचक मा शिविरमा मौका दिइएको, सस्तो, र Noordoostpolder को जंगली स्थानहरू. यो पनि वयस्क र बच्चाहरु उस्तै लागि सुपर मजा छ!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सबैभन्दा विशेष घटनाहरू नेदरल्यान्ड्स मा” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#इवेंटसेरोप #specialeventsbytrain #specialeventsEurope #विशेष नेदरल्याण्ड्स